( 'ကိုကွောကျရှံ့မှ') ပြင်သစ်ကြိယာ '' Craindre '' Conjugate လုပ်နည်း
အဲဒါကို '-aindre,' '-eindre,' နဲ့ '-oindre' ၌အဆုံးသတ်အားလုံးကြိယာများကဲ့သို့ conjugated ရဲ့
Craindre ( "ကြောက်ရွံ့") တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မမှန် -re ကြိယာ -aindre အတွက်အဆုံးသတ်ရှိသမျှသည်အခြားသောပြင်သစ်ကြိယာများကဲ့သို့ conjugated ရဲ့ -eindre နှင့် -oindre ။ ကြောင်း craindre ၏ရိုးရှင်း conjugation ပြသထားတယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒါက conjugation table ထဲမှာထင်ရှားလျက်ရှိ၏ အဆိုပါ conjugation အရန်ကြိယာ avoir နှင့်အတိတ် participle craint ရှိရေးကြောင်းဝင်း conjugation table ထဲမှာမပါဝင်ပါ။
'' Craindre '': '-aindre' ၌အဆုံးသတ်အားလုံးကြိယာလိုပဲ conjugation
prendre တူသော conjugated ကြိယာ, battre တူသော conjugated ကြိယာ, mettre အပေါင်းတို့နှင့်ယင်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ, rompre နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျအပါအဝင်ရှိသူများအပါအဝင်ကြိယာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကြိယာများအပါအဝင်တစ်ပဉ္စမအုပ်စုတစ်စု: မမှန် -re ကြိယာအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ရဲ့ conjugation ကျက်မှတ်စေအနည်းငယ်ပုံစံများထဲသို့ကျ craindre တူသော -aindre အတွက်အဆုံး, peindre တူသော -eindre နှင့် joindre တူသော -oindre ။
ထိုကဲ့သို့သောဆိုးရွား, écrireအဖြစ်အလွန်မမှန်ကြိယာ၏နောက်ဆုံးအုပ်စု Fair သူတို့အဘယ်သူမျှမပုံစံကိုလိုက်နာသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အလို့ငှာမှတ်မိခံရဖို့လိုအပျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့် unwieldy conjugation ရှိသည်။
အတွက်အဆုံးသတ်ကြိယာ၏ပဉ္စမအုပ်စုတစ်စု craindre တူသော -aindre အနည်းကိန်းနှင့်အများကိန်းနှစ်ဦးစလုံးပုံစံများအတွက်ပင်စည်ထဲတွင်ဃပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နှင့်အများကိန်းပုံစံများအတွက်ဎများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဂရမ်ကထပ်ပြောသည်။ craindre ကဲ့သို့အခြားကြိယာများပါဝင်သည်:
contraindre> အတင်းအကျပ်ရန်, အတင်းရန်
plaindre သနားဖို့> အဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ခံစားရရန်
Craindre မြောက်မြားစွာ idiomatic အသုံးအနှုန်းတွေထဲမှာသုံးလေ့ရှိတဲ့အကူးအပြောင်းကြိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ၏ထိတ်လန့်ဖြစ်ဖို့ "သို့မဟုတ်" မကြောက်ဖို့ "" ကြောက်ရွံ့ "အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်။ " အကြောင်းရင်း se Fair craindre "ခြိမ်းခြောက်ရန်။ " ကိုဆိုလိုသည်
craindre Dieu> ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရန် / ကွောကျရှံ့သွားကြဖို့
craindre le pire (အကျွမ်းတဝင်)> အဆိုးဆုံးကြောက်ရွံ့
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း crains rien ။ > မကွောကျပါ။ / ကိုကွောကျရှံ့ဘယ်တော့မှမ။ / မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
craindre àတစ် rien n'y il ။ > နှိုးဆော်သံအဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ / ကြောက်ရွံ့ဘာမျှရှိပါတယ်။
sa gross voix le faisait craindre က de tous ses ဓာတ်လှေကား။ > သူ့စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့စကားသံကိုအထံတော်၌လူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ကျောင်းသားကြောက်လန့်စေတော်မူ၏။
Elle sait se Fair craindre က de ses subordonnés။ > သူမသည်သူမ၏လက်အောက်ခြိမ်းခြောက်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။
je ne crains pas Les piqûres။ > ငါထိုးမကြောက်ဘဲပေါ့။
il ya craindre d'Une ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု Militaire àဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်။ > တစ်ခုမှာစစ်တပ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကနေအဆိုးဆုံးမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
Craignant de la réveiller, il အငြိမ်းစား ses chaussures ။ > သူကသူမ၏နှိုးထကိုကြောက်ရွံ့သည်သူ၏ဖိနပ်ကိုချွတ်ယူကြ၏။
je crains de l'avoir blessée။ > ကျွန်မသူမကိုစိတ်ထိခိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်ပါသည်။
je crains ခံတပ် qu'il (ne) soit déjà trop tard ။ > ကိုယ်ကသိပ်နောက်ကျပြီးသားရဲ့တကယ်ကြောက်တာပါ။
je crains Que oui / မဟုတ်သော။ > ငါကြောက်လန့်နိုင်အောင် / မဟုတ်ဘူး။
CA le froid craint ။ > ဒါဟာအအေးမှအထိခိုက်မခံပါပဲ။
CA craint ။ (အလွန်အလွတ်သဘော)> ဒါဟာအစစ်အမှန်နာကျင်မှုပါပဲ။
တစ်စုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုဘို့ကြောက်ရွံ့> quelqu'un / quelque ကို ရွေးချယ်. သွန်းလောင်း craindre
မမှန်ပြင်သစ် '' -re '' ကြိယာ '' Craindre '' ၏ရိုးရှင်းသော conjugation
လက်ဆောင် အနာဂတ် မစုံလငျ အများကိန်း
je crains craindrai craignais craignant
tu crains craindras craignais
il craint craindra craignait Pass တေးရေးဆရာ
nous craignons craindrons craignions auxiliary verb avoir
vous craignez craindrez craigniez အတိတ် participle craint
ils craignent craindront craignaient
Subjunctive အခြေအနေအရ Pass ရိုးရှင်းတဲ့ မစုံလင် subjunctive
je craigne craindrais craignis craignisse
tu craignes craindrais craignis craignisses
il craigne craindrait craignit craignît
nous craignions craindrions craignîmes craignissions
vous craigniez craindriez craignîtes craignissiez
ils craignent craindraient craignirent craignissent
စပိန်ကြိယာ '' Dejar '' အသုံးပြုခြင်း
အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်တွင်ကြိယာရှိသည်၏ example sentences
အီတလီအသတ်မရှိ Pronoun အသုံးပြုခြင်း
ပွငျသစျထဲတွင် (အိပ်စက်ခြင်းမှ Send / ထားရန်) "Endormir" Conjugate လုပ်နည်း
( 'တစ်စုံတစ်ဦးကထိုင်ခုံမှ') ပြင်သစ်ကြိယာ '' Asseoir '' Conjugate လုပ်နည်း
အီတလီကြိယာ conjugation: Scendere
အီတလီအသုံးပြုမှု 10 ဘုံအမှား: အီတလီ Grammar အမှား
'' Volver '' ၏ conjugation
အချိန်ဖော်ပြချက်တွင် 'သည်' 'ဘာသာ
မင်းသမီးငါးဖန်ခွက် (စီးရီး) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သမ်မာကမျြးပုံပြင်အကျဉ်းချုပ် - ကာနမှာမင်္ဂလာဆောင်
55 ဘီစီ - 450 အေဒီရောမဗြိတိန် Timeline ကို
သငျသညျကို Global စီးပွားရေးလေ့လာဖို့လိုအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ
ဟိန္ဒူဒဿနိကဗေဒကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအကြောင်း Says ကဘာလဲ
Spectrometry မှစ. Spectroscopy အဓိပ္ပာယ်နှင့် Difference
ဒီယေဂို Rivera: အငြင်းပွားမှုရယူရန်အဘယ်သူသည်နာမည်ကျော်အဆိုတော်
လက်တင် Adverb နားလည်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း
တစ်ဦးကို Magic စာလုံးပေါင်းအလုပ်လုပ်ဘို့ဘယ်လို Long ကကယူပါပါသလား
9/11 Terroist တိုက်ခိုက်မှု၏မွတ်စ်လင်သားကောင်များ
ဂျာဗား၌ conditional ဖော်ပြချက်
အဆိုပါ 338 ဖက်ဒရယ်သည့်အရာတစ်ခု - စိတ်လှုပ်ရှား Get ဖို့တစ်ခုခု